Henjehina araka ny lalàna: hihamafy ny sazy ho an’ireo mpanondrana olona any velany | NewsMada
Henjehina araka ny lalàna: hihamafy ny sazy ho an’ireo mpanondrana olona any velany
Par Taratra sur 12/04/2019
Nampahafantarina nandritra ny filankevitry ny minisitra, omaly, fa henjehina araka ny làlana, ary hihamafy ny sazy ho an’ireo mpanondrana sy ireo nahatonga ny fandefasana ireo vehivavy Malagasy miasa any ivelany.
« Henjehina, araka ny lalàna velona, ireo mpanondrana sy ireo nahatonga ny fandefasana vehivavy malagasy miasa any ivelany ka manana olana sy nijaly ary hanonitra ny karama tsy voarain’ireo mpiasa sy ny lany rehetra amin’ny fikarakarana ireo vehivavy malagasy izy ireo », hoy ny tatitry ny filankevitry ny minisitra, omaly momba ny raharaha fanondranana olona hiasa any ivelany. Tapaka nandritry ity filankevitry ny minisitra ity fa hihamafy ny sazy azon’ireo manondrana an-tsokosoko ireo mpiasa malagasy mankany ivelany ary ireo izay rehetra fantatra fa nandefa ireto teratany malagasy nampodiana ka niharan’ny herisetra na tsy nandray ny tambin-karamany. Ireo mpandefa sy ireo voarohirohy mivantana na ankolaka amin’ny fandefasana azy ireo no hanonitra ny lany rehetra sy ny tambiny rehetra momba ireo vehivavy malagasy nampodiana ireo, hoy hatrany ny tatitry ny filankevitry ny minisitra. Hisy koa ny fanaraha-maso manokana ireo toerana fanondranana ireo vehivavy malagasy hiasa any ivelany izay voarara sy tsy nahazoan-dalana ary arahi-maso toy izay koa ny fivoahana ivelan’i Madagasikara amin’ireo zotram-piaramanidina mampitohy an’i Madagasikara amin’ireo faritra voarara ireo.
Hisy laharana telefaonina finday manokana…
Tinapaka tao anatin’ny tatitry ny filankevitry ny minisitra omaly fa hisy ny laharana telefaonina finday entina hahafahan’ny rehetra mifandray mivantana amin’ny tompon’andraikitra manoloana ny kolikoly sy ny fanakanana tsy amin’antony ataon’ireo teratany malagasy miditra sy mivoaka eny amin’ny seranam-piaramanidina rehetra iraisam-pirenena. Ireo mpiasa malagasy manana taratasy ara-dalàna izay efa miasa any ivelany kosa dia afaka mivezivezy malalaka eto an-tanindrazana.
Hisy araka izany, ny fanentanana sy fampahafantarana ny rehetra iarahan’ny minisitera misalahy manoloana ireo herisetra atao amin’ireo vehivavy malagasy mandeha mila ravinahitra na mifindra monina any ivelany ho fampahafantarana azy ireo ny loza sy ny zavatra miandry azy ireo any ivelany, indrindra any amin’ireo faritra voarara tsy tokony handehanan’ireo tovovavy malagasy. Manoloana ny raharaha toy izao, misy ihany ireo tovovavy malagasy sasany mbola mahita hirika hivoahana an’i Madagasikara hiasa any amin’ireny tany arabo ireny. Ankoatra izany, hampanambadiana sinoa lahy antitra any Chine koa ny ankamaroan’izy ireny ary tena misy mihitsy ny kolikoly avo lenta satria misora-panambadiana amin’ny sinoa (toy ireo efa tratran’ny polisy teo aloha) izy ireo mba hanamorana ny fialana eto Madagasikara.